तपाईंहरुले सरकार छाड्ने क्रममा विदेशी प्रभुका सामु झुक्दैनौं भनेर कसलाई इंगीत गर्न खोज्नुभएको हो?
हलेदो भनेर चिनिसकेपछि त्यसलाई कोट्याउनु आवश्यक छैन सुगौली सन्धिपछि नेपालमा हुने गतिविधिका बारेमा सबै जानकार छन्।
आजभन्दा केही वर्षअघि भारतको मान्छे भनेर तपाईंलाई कारबाही गरेको थियो नि पार्टीले?
मलाई कारबाही गरिएको भारतीय मँन्छे भनेर होइन। जसले राजतन्त्रको विरोध गर्छ, त्यसलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर भन्ने प्रचलन पञ्चायतमा थियो। मैंले नेपालमा क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तन अगाडि बढाउनका निमित्त सबैभन्दा ठूलो बाधक राजतन्त्र हो, त्यसलाई उखेल्नपर्छ भन्ने कुरा पार्टीमा जबर्दस्त ढङ्गमा राखेको थिए र त्यसलाई मन नपराउने पार्टी भित्र र बाहिरका मानिसहरुले मेरो चरित्र हत्या गर्ने कोसिस गरेका थिए। तर अन्त्यमा मैंले भने अनुसार नै नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएरै छाड्यो र गणतन्त्र पनि स्थापना भयो। यसमा मलाई गर्व छ।
तपाईंहरु खासगरी अहिले छिमेकी देश भारतको किन यतिधेरै विरोध गरिरहनुभएको छ?
हामी सबै विदेशीहरुको सहयोग चाहान्छौं। देशी विदेशी सबैको सहयोग लिएर हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न चाहान्छौं। तर त्यसको अर्थ कसैको आदेशका अगाडि हामी झुक्दैनौं।
तपाईंहरुले भन्नुभएको यो झुक्ने र सहयोग लिने भनेको कस्तो हो?
राष्ट्रिय हितमा हाम्रा प्राथमिकता अनुसार हामीले माग्ने सहयोग प्राप्त गर्नु सहयोग हो। तर हामीले नमागेका कुराहरु, राष्ट्रिय हित विपरितका कुराहरु कसैले थोपर्न, लाद्न खोज्छ भने त्यसलाई मान्नुलाई हामी झुक्नु भन्छौं।
सरकार टिकाउनका लागि केही भनेको भएचाहिं त्यो सहयोग हुन्थ्यो सरकार टिकाउन सल्लाह नदिएको हुनाले त्यो झुकाउन खोजेको भयो हो?
सरकार टिकाउनकै लागि हो भने हामीले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। त्यसकारण सरकार टिकाउनका लागि होइन। हामी त मूल्यमान्यता र आदर्शका निम्ति सरकार छोड्न पनि तयार भएर राजीनामा दिएका हौं।
यो त तपाईंहरुको द्वैध चरित्र भएन र? गाउँ– गाउँमा अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई गाउँबाट छाड्न पत्राचार गरिएको छ, दोलखामा स्कुल नै बन्द छ। यस्ता घटनाहरु त धेरै छन् नि?
नेपाल अहिले ऐतिहासिक संक्रमणबाट गुज्रेको हुनाले हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी दलहरु, पार्टीमा नलागेका साथीहरु हामी सबैको बलिदान र त्यागले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो। आज यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ, यतिबेला यो शिशु गणतन्त्रलाई कसरी हुर्काउने भन्ने नै चिन्ताको विषय हो। मैंले सुरुदेखि राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभा र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आवाज उठाउदै आए, अहिलेसम्म आइपुग्दा मेरो आधा सपना पुरा भएको छ।
सेनापतिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने त तपाईंहरुको दल र दलीय दृष्टिकोणलाई मात्र लागेको कुरा रहेछ नि?
नेपालको बिडम्बना भन्दा अहिले नागरिक सर्वोच्चता भन्दा माओवादी एक्लै छ, तर एक–दुई वर्षपछि सबै यही बिन्दूमा जम्मा हुनेछन्।
तर त्यहाँ प्रचण्डले सात–आठहजार मात्र लडाकू रहेको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ नि?
उहाले भनेको आधा सत्य हो। कुनै पनि छापामार युद्धमा मिलिसियाको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा हुदैन। छापामार युद्धमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय फोर्सहरु हुन्छ। यहा भनिएको केन्द्रीय कमाण्ड अन्तर्गत रहने नियमित सेना सात–आठ हजार, क्षेत्रीय सेना ३०–३५ हजार स्थानीय ५० हजार गरी गरी हामी लाखौंको सङ्ख्यामा थियौं।
प्रसङ्ग बदलौं, तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने पनि हल्ला थियो नि?
यो अनुमान र हल्ला मात्र हो। सर्वसाधरणले यसरी मूल्यांकन गर्नुलाई म अन्यथा मान्दिन। अहिले म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि नागरिक सर्र्वोच्चता स्थापित गर्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने कुराले त्यस्तो महत्वपूर्ण अर्थ राख्दैन, महत्वपूर्ण कुरा विधिको हो।